Tageen maalmahaan marka codsiga ama kulan loogu talagalay boosteejo ah oo si gaar ah ay weli ku egtahay in ay oo ahaa geli karin in dadka isticmaala ee madal kale. Markii uu kor u cajiib ah oo ah dadka isticmaala casriga ah adduunka oo dhan, waxay ahayd lagama maarmaan in wax lahaa in la sameeyo on hore in loo sameeyo, kuwaas oo ay heli karaan dhammaan. Waayo, emulators users smartphone ahaayeen jawaabta khaladkaasi this. Emulator waxaa loo isticmaalaa marka codsiga loogu talagalay hardware gaar ah waxaa loogu tala galay in la isticmaalo qalabka kale. Sidoo kale, kulan loogu talagalay boosteejo ah oo kala duwan ayaa la ciyaari karaa aalad Android isticmaalaya emulator ah.
Halkan waxaan ku qor 25 kulan oo la ciyaaray karaa aalad Android adigoo isticmaalaya emulator ah:
Mid ka Tani waxay kuu ogolaanaysaa in aad ka ciyaaro kala duwan consoles'ka ciyaarta jir ah oo kuu oggolaanaysa in aad daboosho tiro ka mid ah kulan. Waxay ka kooban yahay emulators kale si aad u ogaato fursadaha ciyaaraha sida NES, SNES, Playstation, N64 iyo kuwa kale. Waxaad dooran kartaa inuu u ciyaaro qof marka aad bilowdo RetroArch.
Haddii aad rabto in lagu dheelo ciyaaraha PokeMon qalabka Android aad, aad u baahan tahay in ay emulator GameBoy kaa caawinaya in aad u ciyaaro ah. Marka aad ka soo dejisan iyo rakibi emulator GameBoy ah, waxaad si fudud u ciyaari karo kulamada PokeMon.
Kuwa doonaya inuu u ciyaaro dukaanka, waxay u baahan yihiin in ay baarto qaar ka mid ah emulators oo caawin kara iyaga u ciyaari flawlessly. Mame u taagan tahay Multiple Arcade Machine Emulator iyo version Android taageeraa in ka badan 8,000 oo ROMS.
Tani waa emulator NES ah oo u sheegi kartaa oo aad u ciyaaro kulan ka mid ah System Nintendo Entertainment taasoo sii jecel ka mid ah ayaa isagana.
Haddii aad rabto in aad ka ciyaari Nintendo64, Mumpen64 waa emulator waa ay fog ugu fiican sababtoo ah waxa ay u ciyaaraa inta badan ROMS. Sidoo kale waa dabacsan oo ku wareejin kartid furayaasha.
Players Ciyaari karaa jir AD Color GameBot isticmaalaya emulator this. Waxaa gabi ahaanba waa bilaash ah oo la shaqeeya ROMS zipped.
Xooggan oo emulator DS
Tani waa emulator cabsi inay ciyaaraha u ciyaaraan DS Nintendo ah. Tani waa emulator ah ee qarnigii 21-aad, sababtoo ah waxaa aad u ogolaanaya in uu ciyaaro kulamo aad u badbaadiseen on Google drive. Emulator Tani waxay sidoo kale taageertaa dar-on gacanta ku Waxa intaa dheer in gacanta ku jirka.
SNES9x hore +
Haddii aad aad u jecel yihiin inay ku ciyaaraan horyaalka Super Mario World ama Final Fantasy, markaas SNES9x hore + waa emulator waa in aad la eegaya. Waxa ay taageertaa keyboard Bluetooth ah ee intaa dheer in ay taageero gamepad Bluetooth, taas oo kuu ogolaanaya in aad u ciyaaro ilaa iyo shan ciyaaryahan oo kala duwan.
Tani waa mid ka emulator kulamada PSone xalinta sare. Waxa kale oo ku siinayaa taageero LAN si yu yeelan karaan laba qalabka ciyaaro labada kulan ee kala duwan. Ciyaaryahanka kulan yihiin gabi ahaanba cajiib ah.
My Free-GBA Emulator Boy!
Tani waa emulator adag u GameBoy Advance. Waxa ay u ogolaataa multiplayer oo uu beddelay nidaamka cable link jir ah Bluetooth.
Kulan xawaaraha Full ka Sega Master System iyo drive ka ahee waxaa taageera this il furan Sega Genesis emulator. Waxaa si fiican ugu shaqeeyeen oo ay taageerto gacanta ku kala duwan sidoo kale.
Emulator Tani waxay kuu ogolaanaysaa inaad ciyaaro aad jeceshahay Atari 2600 kulan. Waxa ay taageertaa Bluetooth jirka, gamepad USB iyo teebabka. Tan waxaa loo qaybiyay kartaa on-screen gacanta ku multi taabto.
Tani waxay la mid ma taageeri aan kulan kasta laakiin, ma jirto wax ikhtiyaar kale oo daboolaya Sega ee Console ee la soo dhaafay. Waxaa jiray qaar ka mid ah kulan weyn oo Dreamcast sidaa daraadeed waxa fiican in ay isticmaalaan emulator this inuu ciyaaro kulan.
Haddii aad rabto in aad ka ciyaaro kulan Sony Playstation, markaas emulator PSP waa mid ka mid ah ugu wanaagsan ee ay leeyihiin qalabka Android aad. Tani waxay sidoo kale kaa caawinaysaa in aad si ay u gudbiyaan kulan PSP aad badbaadiyey. Tani waa waa in ay leedahay kulanka caashaqi jiray PSP.
Kulan Classic sida "Centepede", "ugaasyadii reer Hazard", iyo "Buck Rogers" waxaa la ciyaari karaan qalabka Android aad la emulator this. Users leh noocyo kala duwan oo ay taageerayaan ilaaliyaal Bluetooth iyo xorroyad ciyaari karo.
Emulator waxaa loogu talagalay inuu caawiyo ciyaartoyda ciyaari Sega ee Bilowgii / Megadrive iyo sidoo kale System Master iyo Sega CD. Emulator Tani waxaa ka buuxa xamuulka ah muuqaalada in ay ku daydaan consoles'ka Sega, taageeraa afar ciyaaryahan multitap.
Tani waa version ah Android ee desktop Playstation ciyaarta magaca la mid ah. Waxaa koriyo siman, xaasidnimo sax ee ciyaarta. Waxa ay taageertaa doorasho screen kala oon jidaynayey ah multiplayer isku qalab-iyo sidoo kale siinayaa noocyo kala duwan oo gacanta ku.
Tani waa version aad u qani oo la xoojiyay kulan DOS ku salaysan. Emulator Tani waxay kuu ogolaanaysaa Android users raaxaysan soo diyaariyeen ugu badan ee kulan DOS. Qaar ka mid ah muuqaalada ayaa laga saaray, laakiin waxa ay weli xajisto nuxurka kulan ee raaxaysata ciyaaraha. Waxa kale oo ay taageertaa qaar ka mid ah daaqadaha 9x kulan.
Kanu waa emulator SNES ah. Faa'iidada la emulator tani tahay, waxa ay si toos ogaadaa ROMS ah oo uu leeyahay dhibaato ah kuma qabo files zip. Ciyaaryahanka ciyaari karaa iyadoo la isticmaalayo Bluetooth ama Wi-Fi oo soomi karaa weeraryahanka kulan ka.
All kuwa jeclaan Commodore 64, waxay yeelan karaan dhadhansiinno Dadka kulan la isticmaalayo emulator this. Emulator Tani waxay taageertaa kala duwan oo qaabab file iyo keyboard ama ciyaarta pad Bluetooth ah u la shaqeeyo.
Emulator waxa loogu tala galay kulan NES. Waxa kale oo ay emulates qoriga jir zapper iyo akhriya ROMS ee .nes ama qaabab .unf. Waxay leedahay taageero badbaadin-state iyo sidoo kale gacanta ku configurable.
Mid ka mid ah waxa uu leeyahay hawlaha quruxsan yar oo farabadan oo ka mid ah hababka in emulates. Qaar ka mid ah emulators ka mid yihiin SNES, PSX, GameBoy, NES iyo SEGA. Waxaa si fiican ugu shaqeeyeen ee casriga hooseeyo on xasuusta.
Tani waxay la mid tahay emulator GameBoy iyo GameBoy Color. Waxaa si weyn loo qiimeeyo, xasiloon oo uu leeyahay waafaqsan ROM ugu fiican. Waxa kale oo ka mid ah badhamada degdeg ah weeraryahanka, gacanta turbo iyo qaababka kale oo badan waxaa emulator cabsi samaynta.
Emulator Tani waxay si farxad leh ayaa kaa caawin kara ciyaaryahankii ugu ciyaari aqlabiyad badan ee kulan Neo Geo MVS iyo CapCom CPS 2 daayo.
Tani waa emulator ah u GameBoy Color. Waa wax anfacaya in la abuuro qaababka si ay u la jaan qaada telefoonada low-dhamaadka iyo qaababka ay la mid MyBoy yihiin !.
> Resource > Emulator > 25 Great Games in lagu ciyaari karo iyada oo Emulators on Android